I-lanthanides kunye ne-actinides zihlukaniswe kuzo zonke iitheyibhile zexesha eliqhelekileyo , ngokuqhelekileyo zibonakala njengemiqolo eyahlukileyo phantsi. Isizathu sokubekwa kwesi sikhundla sinxulumene nokuqulunqwa kwee electron zezi zinto.
Iqela le-3B yezinto
Xa ukhangela itafile yexesha, uza kubona okungaqhelekanga kwiqela le-3B lezinto . Iqela le-3B libonisa ukuqala kwezinto zetsimbi zenguqu .
Umqolo wesithathu weqela le-3B liqukethe zonke izinto phakathi kwendima 57 (lanthanum) kunye nesigaba 71 ( lutetium ). Ezi zinto zihlanganiswe kunye kwaye zibizwa ngokuthi i-lanthanides. Ngokufanayo, umgca wesine weqela 3B uqulethe izinto phakathi kwezinto 89 (actinium) kunye nesigaba 103 (umthetho-mthetho). Ezi zinto ziyaziwa ngokuba yi-actinides.
Ukwahlukana phakathi kweqela le-3B ne-4B
Kutheni zonke i-lanthanides kunye ne-actinides zingamaQela 3B? Ukuze uphendule le nto, jonga umehluko phakathi kweqela 3B no-4B.
Iimpawu ze-3B zizinto zokuqala zokuqala ukuzalisa iifowuni ze-shell ze-shell kwi-electron. Iqela le-4B ngowesibili, apho i-electron elandelayo ifakwa kwi-shell 2 .
Ngokomzekelo, i-scandium yinto yokuqala ye-3B ngokucwangciswa kwe- electron ye- [Ar] 3d 1 4s 2 . Into elandelayo yi-titanium kwiqela le-4B ngokucwangciswa kwe-electron [Ar] 3d 2 4s 2 .
Kuyafana phakathi kwe-yttrium kunye noqwalaselo lwe-electron [Kr] 4d 1 5s 2 kunye ne-zirconium kunye noqwalaselo lwe-electron [Kr] 4d 2 5s 2 .
Ukwahlukana phakathi kweqela le-3B ne-4B kukudibanisa kwe-electron kwi-shell ye-shell.
I-lanthanum ine- 1 i- elektron efana nezinye izinto ezi-3B, kodwa i-elektronic d 2 ayibonakali kude kube yinto engama-72 (hafnium). Ngokusekelwe ekuziphatheni kwimigqaliselo yangaphambili, isigaba 58 kufuneka sigcwalise i-electron e- 2 , kodwa endaweni yoko, i-electron igcwalisa i-shell ye-shell eyokuqala.
Zonke izixhobo ze-lanthanide zizalisa i-shell ye-4f ngaphambi kokuba i-electron yesi-5di igcwaliswe. Ekubeni zonke i-lanthanides ziqukethe i-electron 5d 1 , ziseqela le-3B.
Ngokufanayo, i-actinides iqulethe i-electron 6d 1 kwaye igcwalise i-shell ye-5f ngaphambi kokuzalisa i-electron 6d 2 . Zonke i-actinides ziseqela le-3B.
I-lanthanides kunye ne-actinides zihlelwe ngezantsi ngeenkcazo kwisistim somzimba omkhulu kunokuba zenzele indawo yazo zonke ezi zinto kwiqela le-3B kwinqanaba eliphambili letafile yexesha.
Ngenxa yeefowuni zeefowuni, ezi ziqendu ezimbini ziyaziwa ngokuba yi-f-block elements.
Inomic Number 13 - Intshisekelo yeAluminium Facts
Indlela yokuphucula umdlalo wakho webhola lebhola